एउटा इमान्दार केटा चाहियो, म संगै जापान जाने अनि संगै बस्ने काम गर्ने ! तुरुन्तै सम्पर्क गर्नुहोस् । – Life Nepali
काठमान्डौ । म काठमान्डौमा बेचलर रनिङमा पढ्दैछु । मेरो पढाइको विषय मेनेजमेन्ट हो । त्यसकारणा जापन जानको लागी मैले लगभग सम्पुर्ण तयारी गरिसकेको छु । त्यसैले मैले यो सोचेकी म अब पढ्न जाने हो । मेरो लगभग उमेर पनि पुगीसकेको छ । साथमा मैले विवाह गरेर एउटा इमान्दार केटालाई लग्न सके भने उसले नि पैसा कमाउन सक्छ । अनि मलाई पनि साहरा हुनछ । भन्ने मेरो मनमा एउटा विचार आयो । उक्त विचार मैले मेरो घरमा बुबाआमालाइ पनि भने, र बुबाआमाले पनि त्यो कुरा लाई स्विकार गर्नुभयो ।
मैले लगभग २,३ महिना सम्म इमानदार मेहनेती, सहनसिल भएको २२ बर्ष नाघेको केटा पनि खोजे तर भने जस्तो पाउन सकिन र म पूर्व घरबाट फर्केर आए । र हाल म अहिले पनिकाठमान्डौको बसुन्धारा मै बसिरकेको छु । मलाइ छिटो भन्दा छिटो वाहिर जानु पर्ने भएको हुदा सोहि वमोजिमको मेहेनति इमानदार केटा पाएमा विवाह गरिहाल्ने सोँचमा छु । आज मैले राम्रो असल केटाको खोजिले गर्दा यो फेसबुक मार्फत सबैले जानकारी गराएको छु पक्कै पनि तपाइ सबैले पढेर मलाइ उत्तर दिनु हुन्छ । भन्ने विश्वासलागेको छ । यदि तपाइमा मैले भने जस्तो गुणहरू छ भने मात्र मलाइ मेजेस गर्नुहोला नत्र पिलिज तपाइहरूले दुख नगरीदुनु हुन अनुरोध सबैमा गर्दछु ।
Previous हराएकी श्रीमती १० दिन पछि भेट्दा अन्तर्वार्तामै यस्तो भयो (हेर्नुहोस् भिडियो सहित)
Next जस्ताेसुकै बिजी भएपनि एकपटक अवश्य पढाै !! नपढे तपाईलाई प’छुताे हुनेछ !!